YAAB & AMANKAAG - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka YAAB & AMANKAAG
YAAB & AMANKAAG
Soomaaliya dhibta ka jirtaa waa mid aan meella dhaafin, ma jiro mucaarad majarihiisa yaqaan oo wixii u bannaan ka faa’iidaysan yaqaan; balse taa bedelkeed waxay siyaasad u yaqaaniin yaa reer hebeleey oo waxay ku wareegaysanayaan qabiil iyo quruumo laysku rogo, iyo amuuro xun oo aan wax raad ah lahayn
Xukuumadan maalinwalba ceebteedu bannaanka taal ifinmaayaane waxay ku mashquulsanyihiin sidee dadka isugu diraa laysu laayaa oo loo kala qaxaa. loo cunaa hargaha iyo saamaha.
Saxaafadi ma jirto ka faa’iidaysan karta marba meesha in la daba dhigto u baahan in buunka lagu afuufo. Aan biyo dhacee waxaynu maqalay Wasiir Xamasa Siciid Xamsa oo sheegay inuu waayey meel uu ku shaqeeyo iyo shaqaale la shaqeeya markii loo bedelay Wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha. Waxaa inoo xigey Raisalwasaaraha oo kulansiiyey labadaa wasiir. Wasiirka gargaarka Marwo khadiija Maxamed Diiriye ayaan maqalay oo tidhi “Madaxdeyda qaranka kama weyni raalli-gelina waa qaadasho, walaalkey Hon Xamza cafis baa iga tahay Aboow,”
Marka waxaa iswaydiin leh maxaa gabadha laga siiyey raaligelin ma warkii Xamsaa been ahaa mise gabadhan geed adayga ah ayaan lagu dhici Karin in la sheego wixii ay halaysay. Hashu maankayga gadaye ma miinshaar bay laqday.
Saw wax lala yaabo maaha Wasiiradan aan cidina la xisaaabtami Karin wixii ay doonayaanba ha faleene. sikasta wararka haloogu qaadaadhigo oo si kasta Warfidiyeenka caalamku ceebtooda ha u tebiyee.
Yaa dalkan u maqan yaa dawlad u ah yaa mucaarad ildheer u ah, yaa garan kara meelaha lagukala adkaado. May durbaan ka daba tumaan dawladan ceebteedu bannaanka taal oo maalinba mid wuxuu lunsaday ama kharbuday si uun saxaafada loogu arkayo.
Hadal wuxuu amaanyahay
Oodiisu kaa rogan.
Bal waxa inanta raaligelinta laga siiyey hanaloo sheego.
W/Q: Hassan M. Dhiillood
Previous articleWEJIGA UU YEESHAY BANGIGA DHEXE EE SOOMAALIYA
Next articleGABAYGII IYO GABYAAGII OO BUUHOODLE JOOGA